Kenya oo Dacwad Ka Furantahay Sonkor La Sheegay in Aay Sumaysan tahay, iyo Soomaalida xaafada ISLII, | Biyoguurenews.com
Home Wararka Kenya oo Dacwad Ka Furantahay Sonkor La Sheegay in Aay Sumaysan tahay,...
Kenya oo Dacwad Ka Furantahay Sonkor La Sheegay in Aay Sumaysan tahay, iyo Soomaalida xaafada ISLII,
Muran xooggan ayaa ka dhashay dalka Kenya kaddib markii uu wasiirka arrimaha gudaha uu isbuucii la soo dhaafay sheegay in sunkorta ay shacabka isticmaalaan ay ku jirto maadada Mercury-ga taasi oo halis gelinayso shacabka . Arrintan ayaa cabsi badan abuurtay iyo sidoo kal muran siyaasdeed.
Isbuuci la soo dhaafay ,dowladda ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay 1,000 juwaan oo sonkor ah , taasi oo si sharci darro ah lagu soo geliyey caasimadda dalka ee Nairobi.
Wasiirka arrimaha gudaha Fred Matiang’i ayaa saxaafadda u sheegay in sonkorta laga soo qabtay xaafadda ay Soomaalida ku badan tahay ee Islii ee magaalada Nairobi laga helay maadooyin halis ah, kaddib markii baaritaan lagu sameeyey.
Balse waxaa eedaymahaasi shaki geliyay Wasiirka ganacsiga Adan Maxamed oo beeniyey in sonkortaasi ay ku jirto maadooyinka la sheegay.
Waaxda dalka Kenya u qaabilsan xakamaynta alaabaha ay isticmaalan shacabka ee KEBS ayaa sidoo kale beenisay in laga helay sonkorta maadooyin halis ah.
Balse madaxa shirkadda Charles Ongwae, ayaa Khamiistii baarlamaanka hortiisa ka sheegay in sonkorta laga helay maadooyinka copper iyo lead.
Maalintii Jimcaha ayaa waxaa la xiray Mr Ongwae iyo saraakil kale ee ka tirsan Waaxda Kebs arrimo lala xirriray fadeexaddaas.
Waaxda loo xilsaaray baaritaanka sonkorta ayaa diiday inay BBCda u xaqiijiso in natiijadii ka soo baxday baaritaankaas.
Waxa hadda adag in qiyaas arrintaa laga qaato iyadoo wararka ka soo baxayo dhanka dowladda ay yihiin kuwa is khilaafsan.
Balse dadka arrintan ka faalooda ayaa sheegay in dadaalka ay dowladda wado ayssan shacabku ku qanacsanayn.
Dr Catherine Kunyanga, oo wax ka barta jaamacadda Nairobi ayaa tiri” wararka is khilaafsan ee ka soo baxaya dowladda ayaa shacabka walaac ku abuurayo”Dr Kunyanga ayaa dadka oo oga digtay inay soo iibsadaan sonkor raqiis ah ,iyadoo taasi ku sheegtay in laga yaaba inay tahay sonkorta ay ku jirto maadooyink halista ah.
Wasiirka Caafimaadka ee dalka Kenya ayaa amar ku siisay xubnaha 47 maamul-goboleed u xilsaaran dhanka caafimaadka inay baaran sonkorta lagu iibiyo gudaha dalka.”
Sarkaal ka tirsan Wasaaradda Caafimaadka ayaa BBCda u sheegay Arbacadii inay haboonayn inuu ka ahdlo fadeexadan xillgan , wuxuuna ugu yeeray arrintan inay tahay ” arrin khaas u ah ammaanka gudaha dalka”
Qiimaha sonkorta ayaa kor u kacay qeybo ka mid ah dalka, taasi oo dhibaatooyin u horseeday ganacsatada iyo macaamiisha.
Daqane Axmed, oo dukaan ku leh xaafadd Islii ee magaalada Nairobi ayaa sheegay inay hada adagtahay in la helo sonkor.
Waxan sonkorta ku iibsan jirnay 50kg ilaa iyo $40 , balse hadda waxaa la iibinayaa $62″
Mr Axmed ayaa sheegay in qiimaha lagu iibsan jiray 1kg uu laba jibaarmay oo ay adagtahay inay macaamiisha awoodan qiimahaas.
Dadka ayaa baraha bulshada ku muujiyey walaacooda ku aadan arrinta sonkorta , iyagoo is weydiinayey su’aalo badan.
Qaar badan oo ka mid ah ayaa olole ka waday barta Twitter-ka si ay u cambaareeyaan wararka been abuurka ah ee ay siyaasiyiinta ka sameeyeen fadeexaddan.
Previous articleDeg deg, Prof Cabdi Ismacil Samatar oo Si Qoto Dheer Uga hadlay Janan Gabre oo la Eryay
Next articleDaawo, Masuuliyiinta Gobolka Saaxil oo Gudoomay Xolo Nool oo Degaanka Waabo jano Ugu Deeqay Cidamada qaranka somaliland eee jiida hore